WordPress iPhone ngwa mgbakwunye: Admin na Isiokwu | Martech Zone
WordPress iPhone ngwa mgbakwunye: Admin na Isiokwu
Thursday, July 2, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ebe ọ bụ na-emelite blọọgụ m ma tinye WordPress na Amazon S3, M nwee ike wepụ caching plugins. Ihe mkpuchi ihe na-arụ ọrụ na-adịghị mma ma e jiri ya tụnyere ịkwanye ihe oyiyi m niile na S3. (Mygwọ ọnwa mbụ m: $ 0.50).
M na-aghọta na caching nwere ike afanyekwa ụfọdụ ndị ọzọ arụmọrụ nke m na saịtị… ma ọ ga-egbochi m imelite saịtị na customizations maka iPhone, Blackberry, na ndị ọzọ na mobile ngwaọrụ. Ihe iseokwu a bụ na otu onye ọbịa nwere ike ịga na peeji ahụ na ngwaọrụ ejiri aka, ọ na-echekwa ya, a na-ewetakwa onye na-esote ya na ụdị aka ahụ na ihe nchọgharị ha. Caching na ike gburugburu adịghị mix ọma.
Ihe mgbakwunye mbụ m chọtara maka imepụta ihe mara mma maka iPhone, Blackberry, na ngwaọrụ ndị ọzọ ejiri aka bụ Ederede Mobile Mobile plugin.
Nke a plugin mepụtara site Otuowo Ama. M nwalere ngwa mgbakwunye na iPod Touch na Blackberry m na echiche abụọ ahụ dị ịtụnanya. Ekele diri ndị mmepe nke ngwa mgbakwunye a maka ịkachasị echiche na igodo maka Safari na iPhone ma ọ bụ iPod Touch yana Blackberry na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Otu ndetu na wụnye ngwa mgbakwunye a, ọ chọrọ ntinye dị iche karịa ọtụtụ plugins. Ga-ebu ụzọ bulite isiokwu ahụ na gburugburu ndekọ, wee bulite ma rụọ ọrụ mgbakwunye ahụ. Obi dị m ụtọ, ndị ode akwụkwọ na - eme ka ị mara mgbe ị wụnye ya na ezighi ezi. 🙂
iPhone WordPress ochichi
Ihe mgbakwunye iPhone ọzọ dị egwu achọtara m bụ WPhone. WPhone na - enye gị ohere ijikwa WordPress kpamkpam n’ime ihe nchịkwa nchịkwa kachasị maka Safari na iPhone ma ọ bụ iPod Touch. Dị jụụ n'ezie!
Enwebeghị m ngwa mgbakwunye a ebe ọ bụ na m na-emekarị ọfụma 'tinkering' na nke ọ bụla n'ime posts m, mana maka gị ndị na-achọ ụfọdụ ịdị mma iPhone WordPress, nke a yiri ka ọ bụ nnukwu ngwa mgbakwunye!
Dika sistemụ njikwa ọdịnaya na-aga n’ihu, enwere m olile anya na ndị mmepe webatara ihe nchọgharị mkpanaka na ngwakọta ngwaọrụ mkpanaka dịka akụkụ nke atụmatụ ha. Carl Weinschenk nwere nnukwu edemede na - akọwa agha nchọgharị ekwentị na - abịanụ.
Site na Opera Mobile ebudatara ihe karịrị ugboro 40 na iPhone ugbu a na-atụle 0.19 pasent nke ịgagharị zuru ụwa ọnụ… njikarịcha ekwentị ga-aghọ ọtụtụ uru asọmpi n'oge na-adịghị anya!
Tags: iphone ngwa mgbakwunyeisiokwu iphonewordpress haisiokwu mkpado
Douglas Karr Thursday, July 2, 2009 Sunday, October 4, 2015
Ọ bụ Ọchịchị, Anọ m na Crackberry
Ahia ahia gi na ire ahia dika Osimiri
iPhone App Ahịa
Jun 1, 2011 na 3:46 AM
Saịtị a jupụtara na ozi dị mkpa maka ndị mmepe ngwa iPhone na ndị ọrụ. Ekwenyesiri m ike na ọtụtụ ndị na-eleta saịtị a ga-amasịkwa ya. Ekele dịrị onye nchịkwa na onye nwe saịtị a. Nke a ga - enyekwu ozi maka mmepe nke ụlọ ọrụ iPhones.